35 liiska CSS iyo HTML ee mobilada, baloogyada, eCommerce iyo inbadan | Abuurista khadka tooska ah
35 menus ee HTML iyo CSS
Markan waa waqtigii loogu talagalay menus ee HTML iyo CSS oo aad ku noolaan karto si ku filan kuwa walxaha muhiimka ah ee noo oggolaanaya inaan ku toosinno adeegsadaha qaybaha ugu muhiimsan ee eCommerce, blog iyo wixii intaa ka badan. Waxaan u raaceynaa iyaga si aan u siino taabashadaas bartayada iyo in ay tahay sida ugu macquulsan heerarka naqshadeynta UI.
1 Xullo liiska 'accordion'
2 Swanky Pure CSS ayaa hoos u dhacaya
3 Menu muxaadaro
4 Liiska taagan oo leh jQuery iyo CSS3
5 Liiska wareega
6 Liiska Radial
7 Wareegtada CSS HTML menu
8 Fikradda menu giraanta
9 Ubax soo baxa menu
10 Nasashada Hover Nav
11 Drop navigation
12 Nadiifinta liiska CSS
13 Liiska jawaabta iyo fudud
14 Liiska shaashadda oo buuxa ee SVG
15 CSS Menu ee Mega
16 Fikrad kale oo menu ah
17 Maqaalka Naqshadeynta Maaddada
18 Burger menu-ga
19 Velocity.js Flexbox sanduuqa buuxa
20 Bog buuxa oo ka baxsan shiraac
21 Hover saamaynta liiska menu
22 CSS fikradda menu-clip-path
23 Gawaarida Strikethrough
24 Liistada Lavalamp CSS
25 Iskuduwaha socodka
26 Wareegtada moobaylka
27 IPhone X fikradda menu-ka moobiilka
28 Submenu balaadhi mobilka
29 Dhaqdhaqaaqa wareega ee mobilada
30 Liistada leh rogrogmada iyo hoos udhaca saameynta
31 Liiska moobaylka
32 Bixinta maraakiibta ka baxsan
33 Qarsoon CSS menu
34 Dhinac dhinac socodka ah oo go'an
Xullo liiska 'accordion'
Un liiska batoonka ama menu hamburger oo ka kooban animations nimco leh taabasho yar oo saameyn weyn leh.
9 menus CSS dhinaceeda ma waayi kartid
Swanky Pure CSS ayaa hoos u dhacaya
Este liiska miiska es aad u fudud hadaan isbarbar dhig ku sameyno labadii hore HTML, JS iyo CSS.
16 menus cascading ee CSS si dib loogu habeeyo websaydhkaaga
Liiska taagan oo leh jQuery iyo CSS3
Un menu toosan oo leh jQuery iyo CSS3 de taabasho weyn oo app ah ama degel Dhammaan noocyada kala-guurka iyo jiheeyaha leh hooska ugu yar.
Un menu wareegsan de marin tijaabo ah kaas oo si fiican ugu shaqeeya degel farsamo. Lagu soo saaray SVG iyo Platform Animation GreenSock, way ka duwan yihiin shaki la'aan.
Kuwa kale radial menu oo tijaabo ah taas oo si qumman u ansaxaysa bog loogu talagalay ciyaar.
Wareegtada CSS HTML menu
Un menu wareegsan CSS HTML in la dhigo dhinaca dambe iyo taas wuxuu u furaa si wareeg ah leh khibrad weyn oo isticmaale.
Fikradda menu giraanta
Arrintan giraanta menu ka links waa la taagan yahay mid kasta dusheeda si loo sameeyo siddooyin kala duwan.
Ubax soo baxa menu
Wax kale oo gaar ah menu-pop-up oo leh animation si aad u wanaagsan loo adeegsado oo soo saaraya saameyn weyn.
Nasashada Hover Nav
Nasashada Hover Nav waa a tayo sare leh hoos u dhig liiska loogu talagalay animations-yadaas oo si dhammaystiran u tilmaamaya qaab-dhismeedka waxa ku jira shabakadda.
Un liiska hoos u dhigista la mid ah kii hore inkasta oo ay la socdaan nashqado kale oo ku jira nashqadda is-dhexgalka.
Nadiifinta liiska CSS
Kuwa kale tayada liistada liiska CSS kaas oo raacaya heerarka naqshadeynta UI ee hadda jira.
Liiska jawaabta iyo fudud
A shaashad buuxda, tan menu ka jawaabaya oo fudud HTML5 iyo CSS3 waxay la jaan qaadayaan Internet Explorer 11.
Liiska shaashadda oo buuxa ee SVG
Un menu shaashad buuxda ee SVG oo la dhigay dhinaca hamburger waana mid indhaha soo jiidanaysa.
CSS Menu ee Mega
Un Meen Menu ee CSS iyo HTML ka duwan waxa la arko, oo leh qaab casri ah oo aad u yar.
Fikrad kale oo menu ah
Fikrad kale oo menu ah waa ikhtiyaarka ugu habboon haddii waxaad raadineysaa menu ka duwan kan asalka ahMidkani waa mid aad ugu mahadcelinaya menu-ga caadada u ah astaanta iyo animation si xamaasad leh loo hindisay
Maqaalka Naqshadeynta Maaddada
Maqaalka Naqshadeynta Maaddada waa ku saleysan luqadda naqshadeynta Google.
Velocity.js Flexbox sanduuqa buuxa
Velocity.js Flexbox sanduuqa buuxa waa menu ah tayada weyn ee saameynta la gaadhay iyo waayo-aragnimadeeda isticmaale ee ugu dhow. Flexbox shaashad buuxda leh xawaare.js.
Bog buuxa oo ka baxsan shiraac
Bog buuxa oo ka baxsan shiraac waa tayo sare leh, shaashad shaashad buuxda leh oo si fiican ugu shaqeysa soo bandhigida sida loo sameeyo shabakad qiyamkaas.
Hover saamaynta liiska menu
Un hover menu saameyn khad fudud oo aad u fiican.
CSS fikradda menu-clip-path
Fikrad kale oo ah menu leh clip-path oo ka kooban hover aad u xiisa badan iyo qaar ka mid ah qaybaha animated.
Gawaarida Strikethrough waa menu kale dul istaag isku xirnaanta xiisaha leh Natiijada
Liistada Lavalamp CSS
Liistada Lavalamp CSS waxaa ku jira a dhaqdhaqaaq animation mid kasta oo ka mid ah xiriiriyeyaasha taasi waxay isu dhiibaysaa firfircoonaan.
Un slider marinka taas oo ku duuban xiriir kasta in lagu garto midab casaan leh iyo animation si fiican loo daryeelay oo natiijooyin fiican leh.
Un Burger menu navigation saameyn weyn oo loogu talagalay qalabka moobiilka.
IPhone X fikradda menu-ka moobiilka
Un menu loogu talagalay iPhone X taasi waxay ku siin kartaa boggaaga taabashada tayada u dhigma naqshadda taleefanka Apple.
Submenu balaadhi mobilka
Submenu balaadhi mobilka waxaa loogu talagalay cagta la animation nimco iyo barakac aad u haboon. Elegance dhammaan heerarka loogu talagalay isugeynta moobiilka ee abkaaga ama boggaaga.
Dhaqdhaqaaqa wareega ee mobilada
Kuwa kale menu animated loogu talagalay mobilada leh taariikh wareeg ah oo animated leh natiijooyin muuqaal oo weyn.
Liistada leh rogrogmada iyo hoos udhaca saameynta
Kuwa kale saameyn weyn u leh menu ka duwan oo jilicsan. Bari menu la rogrogmadaan iyo hoos saamaynta waxay ku habboon tahay makhaayadaha, dib u eegista, iyo inbadan.
Un shaandhada menu mobile loo beddelay nooca webka oo loogu talagalay moobilka.
Bixinta maraakiibta ka baxsan
Bixinta maraakiibta ka baxsan Waa menu in tijaabi kala-guurka iyo hagidda inuu ahaado mid aad u taagan. Haddii aad raadineyso wax cusub oo aad la yaabto, heerkeedu waa kan ugu fiican liiskan.
Qarsoon CSS menu
Un menu menu ee CSS maxaa qarsoon oo sidaas ayay ku muuqataa astaanta hamburger.
Dhinac dhinac socodka ah oo go'an
Adeegso bootstrap halkii Flexbox si loo taageero IE9 / 10. Liis kale oo heer sare ah oo loogu talagalay Dhinac dhinac socodka ah oo go'an fikradeeda.
morphing tab waa menu hoos u dhac ku yimaada markaad wax riixdo badhanka tabka weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 35 menus ee HTML iyo CSS
Waad salaaman tihiin waxaan ka helay liiska kala geddisan ee laga heli karo boggan mid aad u xiiso badan, su'aashaydu waxay tahay sidee baad u rakibtaa faylasha js ee meeniska? dhowr jeer ayaan isku dayay inaan dhiso menu kasta kuwa js aan shaqeynin, ama aan rakibi karin, kormeerida walxaha biraawsarka waxay oraneysaa shaqada marka hore soo muuqata lama qeexin sidaas darteed dhammaan liiska
Wax ku biirinta wanaagsan :)
Aad u fiican waxaan rajeynayaa inay jiraan dad badan oo adiga oo kale ah, oo caqligooda iyo aqoontooda la wadaaga dadka kale.
Ku jawaab Cami
Sida sawir loogu beero Photoshop, fudud oo dhakhso leh